Shaandaar (2015) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ Shaandaar(2015)ဆိုတဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဂျက်ဂျင်ဒါဂျိုဂင်ဒါဆိုတဲ့မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်သူတစ်ယောက်ဟာ အာလီယာတို့မိသားစုအတွက် အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ စိတ်အပန်းပြေဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ ဂျက်ဂျင်ဒါဂျိုဂင်ဒါဟာ ဘီပင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူအီရှာရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲဟာ မိသားစုနှစ်စုကြားစီးပွားရေးသဘောတူညီချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စီစဉ်ရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါ။ အီရှာရဲ့သတို့သားလောင်းဖြစ်သူရော်ဘင်ဟာ အီရှာ့အပေါ်မှာ body shamingလုပ်ပြီးလေးစားမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာလည်း.....ဂျက်ဂျင်ဒါဂျိုဂင်ဒါဟာ မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ဖို့ရောက်လာရင်း ဘီပင်ရဲ့မွေးစားသမီးဖြစ်သူအာလီယာနဲ့ခင်မင်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါရှိပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သဘောကျသွားပြီးတဲ့နောက် အတူတူအဖော်ပြုရင်းအိပ်ပျော်နိုင်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာပွဲနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ.....ဘီပင်တို့မိသားစုရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ၊ဘီပင့်အမေဟာ မတော်တဆတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့.......မင်္ဂလာပွဲဟာ အဆင်ပြေပြေပြီးဆုံးသွားပါ့မလား၊ အာလီယာဟာ ဘီပင်ရဲ့မွေးစားသမီးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုလည်း ဘယ်လိုများအသေအချာသိရှိသွားရမလဲ၊ အီရှာကရော သူ့အပေါ်လေးစားမှုမရှိတဲ့သတို့သားလောင်းကို ငြင်းပယ်ခွင့်ရပါ့မလား၊ ဘီပင်တို့မိသားစုရဲ့အခြေအနေကရော ဘယ်လိုတွေများဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကြည့်ရှုလို့ရမဲ့ဟာသကားလေးဖြစ်တာကြောင့် လတ်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Shaandaar(2015)ဆိုတဲ့အိႏၵိယဇာတ္ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ ဂ်က္ဂ်င္ဒါဂ်ိဳဂင္ဒါဆိုတဲ့မဂၤလာပြဲစီစဥ္သူတစ္ေယာက္ဟာ အာလီယာတို႔မိသားစုအတြက္ အစီအစဥ္ေတြေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္အေၾကာင္းအရာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ႔ စိတ္အပန္းေျပဖြယ္ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါ။ ဂ်က္ဂ်င္ဒါဂ်ိဳဂင္ဒါဟာ ဘီပင္ရဲ႕သမီးျဖစ္သူအီရွာရဲ႕မဂၤလာပြဲအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။ မဂၤလာပြဲဟာ မိသားစုႏွစ္စုၾကားစီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္စီစဥ္ရတဲ့ပြဲတစ္ပြဲပါ။ အီရွာရဲ႕သတို႔သားေလာင္းျဖစ္သူေရာ္ဘင္ဟာ အီရွာ့အေပၚမွာ body shamingလုပ္ၿပီးေလးစားမႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ တစ္ဖက္မွာလည္း.....ဂ်က္ဂ်င္ဒါဂ်ိဳဂင္ဒါဟာ မဂၤလာပြဲစီစဥ္ဖို႔ေရာက္လာရင္း ဘီပင္ရဲ႕ေမြးစားသမီးျဖစ္သူအာလီယာနဲ႔ခင္မင္သြားခဲ့တယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးမွာ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါရွိေပမဲ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္သေဘာက်သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ အတူတူအေဖာ္ျပဳရင္းအိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္သြားခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါ။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ မဂၤလာပြဲနီးကပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ.....ဘီပင္တို႔မိသားစုရဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္သူ၊ဘီပင့္အေမဟာ မေတာ္တဆတစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့ၿပီးတဲ့​ေနာက္မွာေတာ့.......မဂၤလာပြဲဟာ အဆင္ေျပေျပၿပီးဆုံးသြားပါ့မလား၊ အာလီယာဟာ ဘီပင္ရဲ႕ေမြးစားသမီးဟုတ္သလားမဟုတ္ဘူးလားဆိုတာကိုလည္း ဘယ္လိုမ်ားအေသအခ်ာသိရွိသြားရမလဲ၊ အီရွာကေရာ သူ႔အေပၚေလးစားမႈမရွိတဲ့သတို႔သားေလာင္းကို ျငင္းပယ္ခြင့္ရပါ့မလား၊ ဘီပင္တို႔မိသားစုရဲ႕အေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုေတြမ်ားဆက္ျဖစ္သြားမလဲဆိုတာကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ၾကည့္ရႈလို႔ရမဲ့ဟာသကားေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ လတ္မလႊတ္တမ္းၾကည့္ရႈလိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။ Review – KKK File Size – 1.4GB,2.5GB Format…mp4 Quality : 720p ...
IMDB: 3.6/10 5,543 votes
Brothers (2015) ##unicode အခုဇာတ်ကားလေးကတော့ "Brothers"လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒေးဗစ်နဲ့ မွန်တီဟာ ငယ်စဉ်ကအရမ်းရင်းနှီးချစ်ခင်ကြတဲ့ ဖအေတူမအေကွဲညီအစ်ကိုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖေဖြစ်သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့် သားကြီးဖြစ်သူဒေးဗစ်ဟာအဖေကိုစိတ်နာသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖေထောင်ကလွတ်လာတဲ့တိုင်အောင်ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒေးဗစ်ဟာရူပဗေဒဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဇနီးနဲ့အတူ ကျောက်ကပ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့သမီးတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။ သမီးလေးရဲ့ဆေးရုံစရိတ်တွေအတွက်ရော ဝင်ငွေကိုလုံလောက်အောင်ဘယ်လိုမှမစီမံနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့..... ဒေးဗစ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ R2Fပွဲမှာ ဖိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ...ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့ညီဖြစ်သူမွန်တီဟာ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကြောင့်ပဲ ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့..... ဒေးဗစ်ကပဲ ချန်ပီယံဆုကိုရရှိသွားမလား ၊ မွန်တီကပဲရရှိသွားမလား၊ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ရဲ့သံယောဇဉ်တွေကရော တကယ်အဆုံးသတ်သွားမှာလားဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်... ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုလည်းလက်မလွှတ်တမ်းခံစားလိုက်ကြပါနော်။ ##zawgyi အခုဇာတ္ကားေလးကေတာ့ "Brothers"လို႔ေခၚတဲ့အိႏၵိယဇာတ္ကားေလးပါ။ ေဒးဗစ္နဲ႔ မြန္တီဟာ ငယ္စဥ္ကအရမ္းရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ ဖေအတူမေအကြဲညီအစ္ကိုေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေဖျဖစ္သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အမွားတစ္ခုေၾကာင့္ သားႀကီးျဖစ္သူေဒးဗစ္ဟာအေဖကိုစိတ္နာသြားခဲ့ပါတယ္။ အေဖေထာင္ကလြတ္လာတဲ့တိုင္ေအာင္ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ေဒးဗစ္ဟာ႐ူပေဗဒဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဇနီးနဲ႔အတူ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါခံစားေနရတဲ့သမီးတစ္ေယာက္လည္းရွိပါတယ္။ သမီးေလးရဲ႕ေဆး႐ုံစရိတ္ေတြအတြက္ေရာ ဝင္ေငြကိုလုံေလာက္ေအာင္ဘယ္လိုမွမစီမံႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါမွာေတာ့..... ေဒးဗစ္ဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးက်င္းပတဲ့ R2Fပြဲမွာ ဖိုက္တာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ တစ္ဖက္မွာလဲ...ကြဲကြာေနခဲ့တဲ့ညီျဖစ္သူမြန္တီဟာ သူ႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ​ေၾကာင့္ပဲ ပြဲမွာပါဝင္ဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ႀကိဳးဝိုင္းထဲမွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ဖို႔ျဖစ္လာခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့..... ေဒးဗစ္ကပဲ ခ်န္ပီယံဆုကိုရရွိသြားမလား ၊ မြန္တီကပဲရရွိသြားမလား၊ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ရဲ႕သံေယာဇဥ္ေတြကေရာ တကယ္အဆုံးသတ္သြားမွာလားဆိုတာကို ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ၾကည့္ရႈရမွာပဲျဖစ္တဲ့အတြက္... ဒီဇာတ္လမ္းေလးကိုလည္းလက္မလႊတ္တမ္းခံစားလိုက္ၾကပါေနာ္။ Review – KKK File Size – 1.3GB,3.5GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Drama,Romance Subtitle ...
IMDB: 6.5/10 12,635 votes
Robin des Bois, la véritable histoire (2015) (App member only) ##unicode ရော်ဘင်ဟုဒ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကချမ်းသာတဲ့လူကုံထံတွေဆီကနေခိုးယူပြီးအစာရေဆာငတ်ပြတ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီတဲ့လူလို့သိကြပါတယ် ဒီကားကတော့ဟာသဆန်ဆန်လေးနဲ့ပြောင်းပြန်ရိုက်ကူးထားတာပါ ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ရော်ဘင်ဟုဒ်ဟာဆင်းရဲသူ အမျိုးသမီး အသက်အရွယ်အိုမင်းသူ မသန်စွမ်းသူအစရှိတဲ့သူတွေဆီကနေပဲ ခိုးယူပြီး ကျန်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အန္တရာယ်များတာကြောင့်ခိုးယူခြင်းမပြုဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာပါ ပိုက်ဆံကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရခိုးယူတတ်တဲ့ရော်ဘင်ဟုဒ်နဲ့အတူကြံရာပါသူငယ်ချင်းတက်ခ်ဆိုတဲ့သူလည်းရှိပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိပ်မက်ရည်မှန်းချက်တော့မြို့ထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးပြည့်တန်ဆာအိမ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ရော်ဘင်ဟုဒ်ဟာပြည့်တန်ဆာအိမ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံရအောင်ဘုရင့်အခွန်ငွေတွေကိုဓားပြတိုက်ဖို့ကြံစည်ပါတော့တယ် ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာရှာဝုဒ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြီးရှုပ်ထွေးကုန်ပါတော့တယ် ဒီကားထဲကရော်ဘင်ဟုဒ်ကရောနောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီပေးတဲ့သူဖြစ်သွားမလား ဘုရင့်အခွန်ငွေတွေကိုခိုးယူဖို့အကြံအစည်ကရောအောင်မြင်သွားမှာလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ေရာ္ဘင္ဟုဒ္လို႔ၾကားလိုက္တာနဲ႔လူတိုင္းကခ်မ္းသာတဲ့လူကုံထံေတြဆီကေနခိုးယူၿပီးအစာေရဆာငတ္ျပတ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ဆင္းရဲသားေတြကိုကူညီတဲ့လူလို႔သိၾကပါတယ္ ဒီကားကေတာ့ဟာသဆန္ဆန္ေလးနဲ႔ေျပာင္းျပန္႐ိုက္ကူးထားတာပါ ဒီထဲမွာဆိုရင္ေတာ့ေရာ္ဘင္ဟုဒ္ဟာဆင္းရဲသူ အမ်ိဳးသမီး အသက္အ႐ြယ္အိုမင္းသူ မသန္စြမ္းသူအစရွိတဲ့သူေတြဆီကေနပဲ ခိုးယူၿပီး က်န္တဲ့သူေတြဆိုရင္ေတာ့အႏၲရာယ္မ်ားတာေၾကာင့္ခိုးယူျခင္းမျပဳဘူးလို႔သတ္မွတ္ထားတာပါ ပိုက္ဆံကိုဘယ္လိုနည္းနဲ႔ရရခိုးယူတတ္တဲ့ေရာ္ဘင္ဟုဒ္နဲ႔အတူႀကံရာပါသူငယ္ခ်င္းတက္ခ္ဆိုတဲ့သူလည္းရွိၿပီး သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အိပ္မက္ရည္မွန္းခ်က္ေတာ့ၿမိဳ႕ထဲမွာနာမည္အႀကီးဆုံးျပည့္တန္ဆာအိမ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္ ေရာ္ဘင္ဟုဒ္ဟာျပည့္တန္ဆာအိမ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပိုက္ဆံရေအာင္ဘုရင့္အခြန္ေငြေတြကိုဓားျပတိုက္ဖို႔ႀကံစည္ပါေတာ့တယ္ ဒါေပမယ့္လည္းသူ႔ရဲ႕အစီအစဥ္ဟာရွာဝုဒ္ဆိုတဲ့ဆင္းရဲသားေတြကိုကူညီေပးတဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ေတြ႕ၿပီးရႈပ္ေထြးကုန္ပါေတာ့တယ္ ဒီကားထဲကေရာ္ဘင္ဟုဒ္ကေရာေနာက္ဆုံးမွာဆင္းရဲသားေတြကိုကူညီေပးတဲ့သူျဖစ္သြားမလား ဘုရင့္အခြန္ေငြေတြကိုခိုးယူဖို႔အႀကံအစည္ကေရာေအာင္ျမင္သြားမွာလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Action,Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
The Condemned2(2015) The Condemned2##unicode ပထမကားနဲ့ ကွဲသွားတာတော့ ဒီကားမှာ လူတွေသတ်နေတာကို လူချမ်းသာတွေက ဖန်သားပြင်ကနေကြည့်ပြီး ဘယ်သူအရင်သေမလဲ ဘယ်မှာသေမလဲဆိုတာကို လောင်းကြေးထပ်ကြတာပါ အဲ့လိုမျိူး မလုပ်ခင်မှာ အစက လောင်းကစားစည်းဝိုင်းမှာ လမ်းဘေးက ခိုလှုံရာကင်းမဲ့နေတဲ့ သူတောင်းတွေကို ခေါ်ပြီးလောင်းကြတာပါ အဲဒါနဲ့ လောင်းကစားဒိုင်ကို ဖမ်းဖို့ ဆုကြေးအမဲလိုက်သူတွေက စည်းဝိုင်းမှာ ရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကို မဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး လောင်းကစားဒိုင်ရဲ့ လက်ထောက်က ကလဲ့စားပြန်ချေချင်တာကြောင့် အမဲလိုက်အသင်းမှာပါတဲ့သူတွေဆီသွားပြီး သူတို့ ခေါင်းဆောင် ဝေးလ်တန်နာကို သတ်ပေးဖို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ် ဒီတော့ ဝေးလ်တန်နာ တစ်ယောက် ဒီပြိုင်ပွဲမှာ သူရဲ့သူငယ်ချင်းပြန်သတ်တာကို ဘယ်လိုမျိုး ရှင်သန်အောင် ရုန်းကန်သွားမလဲဆိုတာ.....ရိုက်ကွက် အမိုက်စားတွေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ ##zawgyi ပထမကားနဲ႔ ကြဲသြားတာေတာ့ ဒီကားမွာ လူေတြသတ္ေနတာကို လူခ်မ္းသာေတြက ဖန္သားျပင္ကေနၾကည့္ၿပီး ဘယ္သူအရင္ေသမလဲ ဘယ္မွာေသမလဲဆိုတာကို ေလာင္းေၾကးထပ္ၾကတာပါ အဲ့လိုမ်ိဴး မလုပ္ခင္မွာ အစက ေလာင္းကစားစည္းဝိုင္းမွာ လမ္းေဘးက ခိုလႈံရာကင္းမဲ့ေနတဲ့ သူေတာင္းေတြကို ေခၚၿပီးေလာင္းၾကတာပါ အဲဒါနဲ႔ ေလာင္းကစားဒိုင္ကို ဖမ္းဖို႔ ဆုေၾကးအမဲလိုက္သူေတြက စည္းဝိုင္းမွာ ရွိတဲ့လူအကုန္လုံးကို မဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ေလာင္းကစားဒိုင္ရဲ႕ လက္ေထာက္က ကလဲ့စားျပန္ေခ်ခ်င္တာေၾကာင့္ အမဲလိုက္အသင္းမွာပါတဲ့သူေတြဆီသြားၿပီး သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္ ...
IMDB: 4.2/10 2,527 votes
NH10 (App member only) ##unicode NH10 ဇာတ်လမ်းမှာတော့ Meeraနဲ့ Arjunတို့လင်မယားဟာ အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်တစ်ခုထွက်လာရင်း လမ်းမှာတွေ့တဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ ခဏလောက် ဝင်နားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့နားနေတုန်းမှာ လူတစ်စုရောက်လာပြီး ဆိုင်ထဲကMukashtနဲ့Pinkyလို့ခေါ်တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲကို ရိုက်နှိပ်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားကြတယ်။ Arjunက ဝင်တားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ အဲ့လူတစ်စုက Arjunကိုပါရိုက်သွားခဲ့တယ်။အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ Arjunဟာဒေါသဖြစ်သွားပြီးတော့ Meeraရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ယူလာတဲ့သေနတ်ကိုယူပြီး Meeraတား‌နေတဲ့ကြားထဲက အဲ့လူတစ်စုနောက်လိုက်သွားခဲ့တယ်။Arjunနဲ့Meeraတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အဲ့လူတစ်စုက Mukashtနဲ့Pinkyလို့ခေါ်တဲ့ စုံတွဲတွဲကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်လိုက်တာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။သူတို့လူသတ်နေတာကို Arjunနဲ့Meeraတို့မြင်သွားကြောင်း သိသွားတဲ့ အဲ့လူတစ်စုက သက်သေဖျောက်ဖို့အတွက် Arjunနဲ့Meeraတို့ကိုပါ လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးသတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ လူမရှိတဲ့တောထဲမှာ Arjunနဲ့Meeraတို့နှစ်ယောက် လူသတ်သမားတွေလက်ထဲက ဘယ်လို လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမလဲဆိုတာ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ပေးကြပါအုံး....။ ##zawgyi NH10 ဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ Meeraနဲ႔ Arjunတို႔လင္မယားဟာ အားလပ္ရက္ခရီးစဥ္တစ္ခုထြက္လာရင္း လမ္းမွာေတြ႕တဲ့စားေသာက္ဆိုင္မွာ ခဏေလာက္ ဝင္နားခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔နားေနတုန္းမွာ လူတစ္စုေရာက္လာၿပီး ဆိုင္ထဲကMukashtနဲ႔Pinkyလို႔ေခၚတဲ့ စုံတြဲတစ္တြဲကို ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးဖမ္းေခၚသြားၾကတယ္။ Arjunက ဝင္တားဖို႔ႀကိဳးစားေပမဲ့ အဲ့လူတစ္စုက Arjunကိုပါ႐ိုက္သြားခဲ့တယ္။အ႐ိုက္ခံလိုက္ရတဲ့ Arjunဟာေဒါသျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ Meeraရဲ႕လုံၿခဳံေရးအတြက္ယူလာတဲ့ေသနတ္ကိုယူၿပီး Meeraတား‌ေနတဲ့ၾကားထဲက အဲ့လူတစ္စုေနာက္လိုက္သြားခဲ့တယ္။Arjunနဲ႔Meeraတို႔ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲ့လူတစ္စုက Mukashtနဲ႔Pinkyလို႔ေခၚတဲ့ စုံတြဲတြဲကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္လိုက္တာကိုျမင္ခဲ့ရတယ္။သူတို႔လူသတ္ေနတာကို Arjunနဲ႔Meeraတို႔ျမင္သြားေၾကာင္း သိသြားတဲ့ အဲ့လူတစ္စုက သက္ေသေဖ်ာက္ဖို႔အတြက္ Arjunနဲ႔Meeraတို႔ကိုပါ လိုက္လံဖမ္းဆီးၿပီးသတ္ျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။ လူမရွိတဲ့ေတာထဲမွာ Arjunနဲ႔Meeraတို႔ႏွစ္ေယာက္ လူသတ္သမားေတြလက္ထဲက ဘယ္လို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကမလဲဆိုတာ ဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ေပးၾကပါအုံး....။ Review – ...
Mission: Kidnap the Top Star (2015) (App member only) ##umicode Steel The Top Star(2015) ဒီကားလေးကတော့ Action,Comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် Rating 6.9 ရရှိထားပြီး Castတွေကတော့ မင်းသား Oh Chang Seok အပြင်အခြားသူများလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ယွန်းဘင်က ရုပ်ရည်ချောမောပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးချစ်ခင်မှုရထားတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့မှာတော့ ယွန်းဘင်က ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ် ပြန်ပေးဆွဲသမားက ယွန်းဘင်ကို ဒေါ်လာ၁မီလီယံနဲ့လဲဖို့ပြောပါတော့တယ် ယွန်းဘင်ရဲ့မန်နေဂျာကုမ္မဏီရဲ့သူဋ္ဌေး ဟွမ်ချောအိုက ယွန်းဘင်ကိုပြန်ရှာဖို့လူမိုက်တွေငှါးပြီး ခြေရာခံပေမယ့်မရခဲ့ပါဘူး တစ်ဖက်မှာတော့ ယွန်းဘင်ရဲ့ဆေးကိစ္စကိုစုံစမ်းနေတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်လည်း အတူတူပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ် သူတို့တွေ့ကြပြီး ပူးပေါင်းပြီးလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား??? ပြန်ပေးဆွဲသမားရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တကယ်ပိုက်ဆံလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲ??? ဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ ##zawgyi Steel The Top Star(2015) ဒီကားေလးကေတာ့ Action,Comedy အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္ Rating 6.9 ရ႐ွိထားျပီး Castေတြကေတာ့ မင္းသား Oh Chang Seok အျပင္အျခားသူမ်ားလည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ယြန္းဘင္က ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးခ်စ္ခင္မႈရထားတဲ့ ထိပ္တန္းမင္းသားတစ္ေယာက္ပါ တစ္ေန႔မွာေတာ့ ယြန္းဘင္က ထူးဆန္းတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျပန္ေပးဆြဲခံလိုက္ရပါတယ္ ျပန္ေပးဆြဲသမားက ...
IMDB: 3.6/106votes
I Spit on Your Grave III: Vengeance is Mine (2015) (App member only) ##umicode အဓမ္မကျင့် အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ Jennifer Hills ဟာဆိုရင် သူရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုကုစားဖိုအတွက် အဖွဲလိုက်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ကြမ်းတမ်းလွန်တဲ့အတိတ်ကြောင့် သူမရဲ့ဘဝထဲကို လူအသစ် ထပ်မံအဝင်ခံဖိုကိုကြောက်နေခဲ့ပေမယ့် အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတက်ရင်း သူမ ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဟန်ရှိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးသွားပါတယ် ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီသူငယ်ချင်းမိန်းကလေးကို သူ့ရဲ့ရည်းစားဟောင်းက မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ကာ အမှုကနေလည်းလွတ်မြောက်သွားပါတယ် အဲဒီအပြင် သူတိုရဲ့ဆွေးနွေးဝိုင်းထဲက သူတွေရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲကနေရတဲ့ ရလဒ်ဟာ Jennifer ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် healing မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး သူ့ရဲ့အနီးနားကလူတွေမှာ လူသတ်မှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုကြားလာရတဲ့နောက်မှာတော့ မတရားခံရသူအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာအဖြေဟာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းလည်းမဟုတ် ဥပဒေအရစနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးမှ ရလာမယ့်တရားမျှတတဲ့အပြစ်ပေးမှုလည်းမဟုတ်ဘဲ လက်စားချေတုံပြန်ခြင်းပဲဆိုတာကို ယုံကြည်ပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို သူကိုယ်တိုင် နည်းအမျိုးမျိုးကြံပြီးလိုက်သတ်ပါတော့တယ် သူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက သူ့အတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာအဖြေတစ်ခုရစေမလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးမှာ အဖြေရှာလိုက်ပါနော် (Rape ခန်း 18+ တွေပါလို့ မိသားစုနဲ့တူတူမကြည့်သင့်ပါဘူး ) ##zawgyi အဓမၼက်င့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ Jennifer Hills ဟာဆိုရင္ သူရဲ႕စိတ္က်န္းမာေရးကိုကုစားဖိုအတြက္ အဖြဲလိုက္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္ ၾကမ္းတမ္းလြန္တဲ့အတိတ္ေၾကာင့္ သူမရဲ႕ဘဝထဲကို လူအသစ္ ထပ္မံအဝင္ခံဖိုကိုေၾကာက္ေနခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲတက္ရင္း သူမ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္ဟန္ရွိတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးသြားပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အဲဒီသူငယ္ခ်င္းမိန္းကေလးကို ...
IMDB: 5.2/10 12,736 votes
Barely Lethal (2015) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါတော့ Comedy, Action အမျိုးအစားဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးက ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးသမား အေးဂျင့်တွေအဖြစ် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးတဲ့ အစိုးရအခြေစိုက်လျှို့ဝှက်ကျောင်းက အေးဂျင့် ၈၃။ တစ်နေ့မှာတော့ သူစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရင်းကနေ သူ့အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ကျောင်းတက်၊ ပျော်ပါးနေကြတာကိုမြင်တော့ ၈၄ တစ်ယောက် အားကျပြီး သူလည်းသာမန်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမျိုး ပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်အရမ်းပြင်းပြခဲ့တယ်။ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေ၊ သတင်းတွေစုဆောင်းပြီး အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမှာ သေချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ပြီး ကနေဒါကနေကျောင်းပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းသူ မေဂန်အဖြစ်နဲ့ မြို့သေးသေးလေးတစ်ခုမှာ ဇာတ်မြှုပ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူတောင့်တခဲ့ရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းဆိုတာကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ စစ်ဘက်အတတ်တွေကိုပဲ သင်ယူခဲ့ရတဲ့သူ့အတွက်တော့ အထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်ရတာက ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေထက်တောင် ပိုပြီးခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ အခက်အခဲတွေကြားထဲက မေဂန်တစ်ဖြစ်လည်း အေးဂျင့် ၈၃ တစ်ယောက် သူအိပ်မက်မက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ရပါ့ဦးမလားဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ရှုပေးပါဦး။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါေတာ့ Comedy, Action အမ်ိဳးအစားဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကို တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဇာတ္လိုက္မင္းသမီးက ကေလးေတြကို ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးသမား ေအးဂ်င့္ေတြအျဖစ္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ အစိုးရအေျခစိုက္လၽွို႔ဝွက္ေက်ာင္းက ေအးဂ်င့္ ၈၃။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူစစ္ဆင္ေရးတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရင္းကေန သူ႔အရြယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေတြ ...
IMDB: 5.4/10 20,549 votes
Never Let Go (2015) ##unicode Never Let Goဇာတ်ကားကတော့ မင်းသမီးကြီး Angela Dixonသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။ Lisaဟာ အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်မိပြီး ကလေးရသွားခဲ့တယ်။ အစပိုင်းမှာ ဒီကလေးကိုဖျက်ချဖို့ တွေးထားခဲ့ပေမဲ့ နောက်တော့သမီးလေးကို တစ်ယောက်တည်းမွေးဖွားခဲ့ပြီး အချိန်အနည်းငယ်ကြာမှာ အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ သူမအမေက အကြံပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကလေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်း အပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပန်းဖြေခရီးမှာ Lisaရဲ့သမီးလေးဟာ ကလေးလူကုန်ကူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ Lisaဟာ ပြန်ပေးဆွဲသမားတွေနောက်လိုက်ရင်း မတော်မဆမှုဖြစ်ကာ နယ်ခံရဲတွေက သူ့ကို ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားပါဝောာ့တယ်။ ဒါကြာင့်မို့လို့ ရဲတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲသမီးလေးကိုပြန်ရှာဖို့ Lisaတစ်ယောက် တည်းကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဒီကားမှာမိခင်မေတ္တာတရားကိုရိုက်ကူးထားပြီး မင်းသမီးAngelaရဲ့ခပ်မိုက်မိုက် action scene‌တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာမို့ ကြည့်ရှူကြပါအုံး။ ##zawgyi Never Let Goဇာတ္ကားကေတာ့ မင္းသမီးႀကီး Angela Dixonသ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ကားျဖစ္ပါတယ္။ Lisaဟာ အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေဖာက္ျပန္မိၿပီး ကေလးရသြားခဲ့တယ္။ အစပိုင္းမွာ ဒီကေလးကိုဖ်က္ခ်ဖို႔ ေတြးထားခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ေတာ့သမီးေလးကို တစ္ေယာက္တည္းေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာမွာ အပန္းေျဖခရီးထြက္ဖို႔ သူမအေမက အႀကံေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ကေလးနဲ႔ႏွစ္ေယာက္တည္း အပန္းေျဖခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အပန္းေျဖခရီးမွာ Lisaရဲ႕သမီးေလးဟာ ကေလးလူကုန္ကူးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ျပန္ေပးဆြဲတာကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ Lisaဟာ ျပန္ေပးဆြဲသမားေတြေနာက္လိုက္ရင္း မေတာ္မဆမႈျဖစ္ကာ နယ္ခံရဲေတြက သူ႔ကို ဖမ္းဆီးဖို႔ႀကိဳးစားပါေဝာာ့တယ္။ ဒါၾကာင့္မို႔လို႔ ...
Gatao (2015) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်ဂန်းစတားကားလေးဖြစ်တဲ့ Gatao 1 ကား လေး ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့အားရှုန်းဟာ မြောက်ပိုင်းနယ်မြေလူမိုဏ်ဂိုဏ်းထဲကဖြစ်ပြီးမကြာသေးခင်ကမှ ထောင်ကထွက်လာတာပါ ထောင်ကထွက်လာပြီး သာမန်ဘဝကိုပဲဖြတ်သန်းပြီး လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့ အဘွားဖြစ်သူကပြောပေမယ့် ညီအစ်ကိုတွေကိုသံယောဇဉ်မဖြတ်နိုင်တဲ့အားရှုန်းတစ်ယောက် လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့မကင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ့အားရှုန်းတို့ဂိုဏ်းနဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ သာ့ချောင်ထုံဂိုဏ်းမှာငယ်ရွယ်ပြီး စီးပွားရေးအကွက်မြင်တဲ့ မိုက်ကယ်ဆိုတဲ့သူဟာ သူ့အဖေနေရာကိုဆက်ခံပြီး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်မိုက်ကယ်ဟာသူ့အတွက် အကျိုးအမြတ်ရနိုင်ဖို့အားရှုန်းတို့နယ်မြေထဲက ဈေးနေရာကိုပြန်လည်မွမ်းမံဖို့ကြိုးစားရာကနေပဋိပက္ခတွေစတင်လာပါတော့တယ် အားရှုန်းတစ်ယောက်သူ့ရဲ့နယ်မြေကိုဘယ်လိုကာကွယ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုန္းကထြက္ရွိခဲ့တဲ့ထိုင္ဝမ္ဂန္းစတားကားေလးျဖစ္တဲ့ Gatao 1 ကား ေလး ကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့အားရႈန္းဟာ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမလူမိုဏ္ဂိုဏ္းထဲကျဖစ္ၿပီးမၾကာေသးခင္ကမွ ေထာင္ကထြက္လာတာပါ ေထာင္ကထြက္လာၿပီး သာမန္ဘဝကိုပဲျဖတ္သန္းၿပီး လူဆိုးဂိုဏ္းေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္ျဖတ္ဖို႔ အဘြားျဖစ္သူကေျပာေပမယ့္ ညီအစ္ကိုေတြကိုသံေယာဇဥ္မျဖတ္ႏိုင္တဲ့အားရႈန္းတစ္ေယာက္ လူဆိုးဂိုဏ္းေတြနဲ႔မကင္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ႔အားရႈန္းတို႔ဂိုဏ္းနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္တဲ့ သာ့ေခ်ာင္ထုံဂိုဏ္းမွာငယ္႐ြယ္ၿပီး စီးပြားေရးအကြက္ျမင္တဲ့ မိုက္ကယ္ဆိုတဲ့သူဟာ သူ႔အေဖေနရာကိုဆက္ခံၿပီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာပါတယ္မိုက္ကယ္ဟာသူ႔အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္ဖို႔အားရႈန္းတို႔နယ္ေျမထဲက ေဈးေနရာကိုျပန္လည္မြမ္းမံဖို႔ႀကိဳးစားရာကေနပဋိပကၡေတြစတင္လာပါေတာ့တယ္ အားရႈန္းတစ္ေယာက္သူ႔ရဲ႕နယ္ေျမကိုဘယ္လိုကာကြယ္သြားမလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Action, Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Triple Troubles (2015) ##unicode Triple Trouble ဇာတ်ကားမှာတော့ Vyဟာ ရိုးသားတဲ့သတင်းထောက်ကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ သူမရဲ့အထက်လူကြီးက Shrimp paste လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာ သတင်းသွားယူဖို့ခိုင်းစေခဲ့တာမို့ အဲ့ကျွန်းကို ခရီးထွက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းမှာ Myလိုခေါ်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေးတစ်ဦးနဲ့ Dung လို့ခေါ်တဲ့အိမ်ရှင်မတစ်ဦးနဲ့ရင်းနှီးသွားခဲ့တယ်။ Myက shrimp pasteကျွန်းဇာတိဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံခြားမှာဘဲ အခြေချနေကာ ဒီကျွန်းကိုမဖြစ်မနေကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပြန်လာရသူ‌ဖြစ်ပါတယ်။ Dungကတော့ ဘိုးဘေးပူဇော်ပွဲအတွက် မိသားသုဆီအလည်ပြန်လာတာပါ။ အကျင့်စရိုက်ချင်းတူတဲ့ သူမတို့သုံးယောက်ကခင်မင်သွားကြပြီး အတူတူသောက်ဖို့ချိန်းခဲ့ကြတယ်။ Shrimp pasteကျွန်းဒေသထွက် ဆန်နို့အရက်ကို အမူးသောက်လိုက်မိတဲ့ သူမတို့သုံးယောက်ဟာနောက်နေ့မနက်ကျတော့ ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနိုးလာခဲ့တယ်။ညကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို မှတ်မမိတော့တဲ့သူမတို့သုံးယောက်ကို မြေပိုင်ရှင်Baronက ဖုန်းဆက်ပြီးသူရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို သူမတို့သုံးယောက်ခိုးသွားခဲ့ပါတယ်လို့စွပ်စွဲတော့တယ်။ ညကဘာတွေလုပ်မိမှန်းတောင် မမှတ်တော့တဲ့ Vy My Dungတို့သုံးယောက်ဟာ မြေပိုင်ရှင် Baronပြောတဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းဆိုတာဘာမှန်းမသိပေမဲ့ အဲ့ပစ္စည်းကိုလာ‌မပေးရင် သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံလိုက်ရတာမို့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။သူမတို့သုံးဦး ဒီအဖိုးတန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Triple Trouble ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Vyဟာ ႐ိုးသားတဲ့သတင္းေထာက္ေကာင္မေလးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူမရဲ႕အထက္လူႀကီးက Shrimp paste လို႔ေခၚတဲ့ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းမွာ သတင္းသြားယူဖို႔ခိုင္းေစခဲ့တာမို႔ အဲ့ကြၽန္းကို ခရီးထြက္လာခဲ့တယ္။ လမ္းမွာ Myလိုေခၚတဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ေကာင္မေလးတစ္ဦးနဲ႔ Dung လို႔ေခၚတဲ့အိမ္ရွင္မတစ္ဦးနဲ႔ရင္းႏွီးသြားခဲ့တယ္။ Myက shrimp pasteကြၽန္းဇာတိျဖစ္ေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားမွာဘဲ အေျခခ်ေနကာ ...
12 Golden Ducks (2015) ##unicode 12 Golden Ducks ဇာတ်ကားမှာတော့ Futureဟာ မိန်းကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့လူပါ။ သူ့ရုပ်ရည်အရည်အချင်းကြောင့် သူကမိန်းကလေးများကြားထဲနာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူ့ဘဝထဲမသန်စွမ်းကောင်မလေးတစ်ယောက်ဝင်လာတဲ့အခါ ကောင်မလေးကို သနားပြီးချစ်မိသွားတဲ့ Future တစ်ယောက်က အဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူ့ချစ်သူရဲ့ ငွေတွေလိမ်သွားတာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ အသည်းခွဲခံလိုက်ရပြီးတော့ ပိုက်ဆံတွေပါဆုံးရှုံးသွားတဲ့ Futureတစ်ယောက် အရက်တွေသောက်ကာ ပုံပျက်ပန်းပျက်လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။မိန်းကလေးတွေကလဲ သူ့ကိုမကြိုက်တော့တာကြောင့် အားလုံးရဲ့ပယ်တာကိုခံထားရတဲ့အချိန် အထက်တန်းကျောင်းက ဆရာကကြားသွားတာကြောင့် သူ့တပည့်ဘဝကို ကယ်ဆယ်ပြီးအရင်လို လူချောတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော့တယ်။ အရင်လို လူချောဖြစ်သွားတဲ့ Futureတစ်ယောက် သူ့ဘဝကိုဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်ပြန်လုပ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi 12 Golden Ducks ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Futureဟာ မိန္းကေလးေတြကို ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပိုက္ဆံရွာတဲ့လူပါ။ သူ႔႐ုပ္ရည္အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ သူကမိန္းကေလးမ်ားၾကားထဲနာမည္ႀကီးသူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ သူ႔ဘဝထဲမသန္စြမ္းေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဝင္လာတဲ့အခါ ေကာင္မေလးကို သနားၿပီးခ်စ္မိသြားတဲ့ Future တစ္ေယာက္က အဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔သူ႔ခ်စ္သူရဲ့ ေငြေတြလိမ္သြားတာကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ အသည္းခြဲခံလိုက္ရၿပီးေတာ့ ပိုက္ဆံေတြပါဆုံးရွုံးသြားတဲ့ Futureတစ္ေယာက္ အရက္ေတြေသာက္ကာ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။မိန္းကေလးေတြကလဲ သူ႔ကိုမႀကိဳက္ေတာ့တာေၾကာင့္ အားလုံးရဲ့ပယ္တာကိုခံထားရတဲ့အခ်ိန္ အထက္တန္းေက်ာင္းက ဆရာကၾကားသြားတာေၾကာင့္ သူ႔တပည့္ဘဝကို ကယ္ဆယ္ၿပီးအရင္လို လူေခ်ာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေတာ့တယ္။ အရင္လို လူေခ်ာျဖစ္သြားတဲ့ Futureတစ္ေယာက္ သူ႔ဘဝကိုဘယ္လိုေအာင္ျမင္ေအာင္ျပန္လုပ္မလဲဆိုတာ ၾကည့္ရွုၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File ...
IMDB: 4.7/10 266 votes
Babysitter’s Black Book (2015) ##unicode ကျောင်းမှာ အမြဲအဆင့်၁ရပြီး ကောလိပ်ကောင်းကောင်းကို သွားချင်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူမရဲ့နာမည်က အက်ရှ်လေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပညာရေးမှာ ထူးချွန်တဲ့အပြင် ကလေးထိန်းတဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခုကိုပါ အပိုဝင်ငွေရစေရန် ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စီးပွားရေးမှာ သူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ကိစ္စတိုင်းက လည်း အဆင်ပြေချောမွေ့နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအခြေအနေလေးဟာ ကြာရှည်မရှိခဲ့ရှာပါဘူး။ သူမရဲ့ မိသားစုဟာ ငွေကြေးပြဿနာရှိခဲ့ပြီး သူမအတွက် ဖယ်ထားတဲ့ ကောလိပ်စရိတ်ကို သုံးလိုက်တဲ့ထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာ သူမကလေးထိန်း အဖြစ်လုပ်နေတဲ့ အိမ်က ကလေးအဖေ က သူမကို နာမည်ကြီး ကောလိပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ " ပရပ်စ်မန်း "ကို ဝင်ခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးပြီး ကျောင်းစရိတ်ပါ ပေးဖို့ထိကူညီမယ်ဆိုတော့ သူမအတွက် မျှော်လင့်ချက်အလင်းရောင်လေး သန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ ဒီအကူအညီကို ယူလိုက်လို့ ဘယ်လောက်ထိပေးဆပ်လိုက်ရမလဲ ဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင်......အက်ရှ်လေ တစ်ယောက် ဘာတွေပေးဆပ်လိုက်ရမလဲ။ ...
IMDB: 5.3/10 2,032 votes
The Battalion (2015) ##unicode ဒီဇာတ်ကားကတော့ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာရုရှားစစ်တပ်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးစစ်တပ်အကြောင်းရိုက်ကူးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်အခြေတည်ထားပြီးစကာတင်ကိုးဆုစာရင်းဝင်ကာဆုလေးဆုရရှိထားတဲ့ ကားလည်းဖြစ်ပါတယ် ရုရှားအစိုးရဟာမာရီဘိုကရီဗာဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးစစ်တပ်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ် စစ်တပ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ စစချင်းမှာအလေးအနက်သိပ်မရှိကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကာကွယ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာပြီး ရှေ့တန်းမှာတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားကြပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်းပထမဆုံးစစ်တိုက်ဖူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စစ်မြေပြင်က မလွယ်ကူလှပါဘူး ကြမ်းတမ်းလှတဲ့စစ်မြေပြင်မှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်အောင် ဘယ်လိုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရတယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာမလို့ကြည့်ရှုကြပါဦး ##zawgyi ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ပထမကမာၻစစ္အတြင္းမွာ႐ုရွားစစ္တပ္မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးစစ္တပ္အေၾကာင္း႐ိုက္ကူးတင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚအေျခတည္ထားၿပီးစကာတင္ကိုးဆုစာရင္းဝင္ကာဆုေလးဆုရရွိထားတဲ့ ကားလည္းျဖစ္ပါတယ္ ႐ုရွားအစိုးရဟာမာရီဘိုကရီဗာဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသမီးစစ္တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္ စစ္တပ္ကိုဝင္ေရာက္လာတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ စစခ်င္းမွာအေလးအနက္သိပ္မရွိၾကေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ကာကြယ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာၿပီး ေရွ႕တန္းမွာတိုက္ခိုက္ႏိုင္ဖို႔ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္လည္းပထမဆုံးစစ္တိုက္ဖူးတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္စစ္ေျမျပင္က မလြယ္ကူလွပါဘူး ၾကမ္းတမ္းလွတဲ့စစ္ေျမျပင္မွာအသက္ရွင္က်န္ရစ္ေအာင္ ဘယ္လိုခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစားရတယ္ဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္႐ိုက္ကူးတင္ျပထားတာမလို႔ၾကည့္ရႈၾကပါဦး Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB,1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray,720p Blu-ray Genre : Action, Drama, History Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
Magic Mike XXL (2015) ##unicode Magic Mike 2015 ဒီအခါမှာတော့မိုက်ခ် ကရှေ့ကားတုန်းကရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ပရိဘောဂဆိုင်လေးဖွင့်ပြီး သာသာယာယာနဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတာပါ။ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်းကဖော်ကဖက်တွေရဲ့ အဆက်အသွယ်ကြောင့် အစွယ်ကောင်းလို့ ကမ်းခြေမှာနောက်ဆုံးဖျော်ဖြေပွဲကို လိုက်ပါခဲ့ပါတယ် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဘဲကြီးတွေ လမ်းတစ်လျောက်ဘယ်လိုသောင်းကြမ်းမလဲ ဘယ်လိုကျွတ်မလဲဆိုတာတော့ ကြည့်လိုက်ပါဦး သူတို့လောကရဲ့ အထူးအဆန်းလေးတွေနဲ့ အမြင်ဆန်းလေးတွေလဲ ကြည့်ရှုရမှာပါ ဘယ်လောက်ကဲမယ့် ဘဲကြီး၆ယောက်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi Magic Mike 2015 ဒီအခါမွာေတာ့မိုက္ခ္ ကေရွ႕ကားတုန္းကရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း ပရိေဘာဂဆိုင္ေလးဖြင့္ၿပီး သာသာယာယာနဲ႔ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းေနတာပါ။ဒီလိုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းကေဖာ္ကဖက္ေတြရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေၾကာင့္ အစြယ္ေကာင္းလို႔ ကမ္းေျခမွာေနာက္ဆုံးေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို လိုက္ပါခဲ့ပါတယ္ ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲဘဲႀကီးေတြ လမ္းတစ္ေလ်ာက္ဘယ္လိုေသာင္းၾကမ္းမလဲ ဘယ္လိုကြၽတ္မလဲဆိုတာေတာ့ ၾကည့္လိုက္ပါဦး သူတို႔ေလာကရဲ႕ အထူးအဆန္းေလးေတြနဲ႔ အျမင္ဆန္းေလးေတြလဲ ၾကည့္ရႈရမွာပါ ဘယ္ေလာက္ကဲမယ့္ ဘဲႀကီး၆ေယာက္လဲဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ၾကပါဦးေနာ္ Review – ACP File Size – 1.4GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Genre : Comedy, Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ACP Encoded by Arrow
IMDB: 5.6/10 51,964 votes